CODKA Khamiis 2007-04-12 - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
CODKA Khamiis 2007-04-12
Barnaamijka maanta waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
Xisbiga xag jirkaa ee ka jira dalkan Iswiidhan oo kulan doodeed la yeelana haya xisbiyadda M iyo FP. Xisbigaan oo magaciisa loo soogaabiyo SD, ayeeysen horey u ogolaan jirin xisbiyadda kale ineey la doodaan. TV8 ayaa soo dayna haya doodooda Caawey iyo Axadda.
Dalkan Iswiidhen ayaa lagu eedayna haya ineeysan ka soo bixin, balan qaadyad ay ku saxiixeen kulan ay QM kusoosaartey in faqriga lala dagaalamo. Isla markaana 2015, ay soo dhamaato dhimashadda dhalaanka u lada gaajada iyo jirooyinka.
Shir ka dhacay magaalada Leicester, UK, April 6-8 ayna ka soo qeyb galeen Jaaliyadaha Soomaalida, Xubno ka tirsan Baarlaamanka KMG ah iyo aqoonyahano somaliyeed,socdayna muddo 3 Maalomood ayaa lagu soo saaray baaq kaa soo ka kooban 17 qodob.
Gabar dayar oo furatey ganacsi u gaara, magaalada Göteborg ee dalkan Iswiidhan.
Heesaha ayaan meesha ka maqneen.